Change: Isbeddel. 10 waxyaalood baa noogu wacan jaha wareerka. Qeybta 2-aad Dr Sulub | Arlaadi Online
Home Blog Change: Isbeddel. 10 waxyaalood baa noogu wacan jaha wareerka. Qeybta 2-aad Dr Sulub
Change: Isbeddel. 10 waxyaalood baa noogu wacan jaha wareerka. Qeybta 2-aad Dr Sulub
Isniin July 3, 2017| Arlaadi Online
Waa in arrinta aan ku riyoonayno DADKII FULIN LAHAA la helo. Fikraddii ay wataan dad rumaysan oo raba ayaa fulikarta oo faafikarta oo guul laga gaari karaa. Su’aashu waa: intee qof haysaa diyaar u ah in ay hawl ummadeed fuliyaan? car “koow” dheh oo “naftaydaan hayaa koow” dheh.
Fikradda aan rumaysannahay INTEE WAX KU BIXIN KARNAA? Taas micnaheedu waxa weeye: Waqtiga aad ku bixinkartaa waa imisa? Dadaalka aad ku bixin karta intee le’egyahay? Dhaqaalahaad ku bixin kartaa intee buu le’egyahay? Dantaada gaarka ah ma uga tegi kartaa? Cimrigaaga ma u huri kartaa? Naftaada ma u huri kartaa? Waxa aad bixinayso qaymihiisu intee yahay? Waxaad bixiso ama aad diyaar u tahay in aad bixiso qaymihiisa ayay ku xirantahay ahdaafta aad doonaysid in aad gaartid.
DHAQDHAQAAQEENNA IYO HAWL-QABADKEENNU maalimba maalinta ka dambaysay ma u sii dhawaanaynnaa adaafteenna? Maantay intaan hadafkeena u jirro ma uga dhawnahay intaan shalay u jirrey? Berri ma uga dhawaan karraa intan maanta u jirro? Toddobaadka soo socda,Bisha soo socota, iyo sanadka soo socda ma uga dhawaanaynnaa ahdaafteenna kuwii la soo dhaafay?
MA KU FARAXSANNAHAY arrinta iyo hawsha aan gudanaynno? Waxa ugu fiican ee aan rabno in aan gaarno haddii aynaan hadda gaari Karin, xaqiiqada iyo waaqica taagan wax ma ku qabsankarraa? Xataa haddii aan guuldarraysano, ma ku faraxsanaan karnaa in aan weli jidkii ku taagannahay jidkii guusha na gaarsiinayey, ama aan weli hawshii wanaagsanayd wadno?
Arrinta aan wadnaa FAAIIDO MA UGU JIRTAA ummaddeenna, nafleyda, iyo aadanaha kalaba? Faaiido la gurandoono 5 sano, 10 sano, 20 sano, ama 100 sano ka dib ma tahay?
Halkaan ka akhriso qeybta 1-aad Change: Isbeddel. 10 waxyaalood baa noogu wacan jaha wareerka. Dr Sulub
W/Q Dr. Abdurahman Ahmed Noor “Sulub”